ကြုံတုန်းဆုံတုန်း - Owl Myanmar News
OM | May 12, 2021 | Insect | No Comments
ကိုတွတ်ကြီးသည် လက်မှနာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ်လမ်းကိုဆက်လျောက်နေသည်။ အချိန်က ညနေငါးနာရီကျော်ကျော်သာရှိသေးသော်လည်း မိုးသာများအုံဆိုင်နေသောကြောင့် အမှောင်ဘက်သို့ သန်းနေတော့သည်။ ပန်းဆိုးတန်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရုံးဝန်းထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကိုတွတ်ကြီးသည် တကောင်းကြွက် လူပျိုသိုးကြီးဖြစ်သည်။ အသက်က ၃၅ အသားဖြူဖြူ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် ကြည့်ကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တိုင် တကိုယ်တည်းလူပျိုကြီးဘဝဖြင့်သာရှိသဖြင့် ရင်းနှီးသူများ က လူလည်ကြီး ပါတ်စားနေသူကြီးဟု အကြောင်းသိချင်းစကြသည်။ ဒီနေ့ကိုတွတ်ကြီးတစ်ယောက် မန်နေဂျာအမကြီးနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်သောကြောင့် ခပ်ညစ်ညစ်ဖြင့် ခွက်ပုန်းဆိုင်ဝင်ကာ နည်းနည်းဝင်ကစ်နေသဖြင့် နည်းနည်းနောက်ကျနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ မြို့သစ်ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်သို့ပြန်ရန်။
ဆူလေမှတ်တိုင်းတွင်များပြားလှသောလူအုပ်နှင့်အတူရော၍ကိုတွတ်တစ်ယောက်ခပ်ထွေထွေနှင့်ကားစောင့်နေမိသည်။ မကြာမီ ဘီအမ်တစ်စီးဆိုက်လာ၍ ခပ်သွက် သွက်တက်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးခုံးနှင့်နံရံကြားဒေါင့် နှစ်ပေခန့်သောဂျောင်လေတွင်လွတ်သဖြင့် အသာရပ်ရင်း အပြင်ဘက်ကိုငေးမော၍ ပါတ်ဝန်ကျင်ကို ခဏမေ့နေမိသည်။ ဟိုဘက်ဒေါင့်ကအကို လက်လွယ်ရင် ကားခလှမ်းမယ် အိပ်ကပ်ထဲကအကြွေးကို ကပျာကယာထုတ်ပေးရင်း စိတ်ထဲက စပါယ်ယာကိုကျိန်ဆဲလိုက်မိသည်။ မောင်း ဆရာရေ့။ နည်းနည်းမှေးထားမယ် ။လိုက်ရင်တင်မယ်။ ပါတယ် ဆရာရေ့ နောက်ထဲကိုဝင်မယ် မောင်း ကားခလေးတွေလှမ်းထားမယ် ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့မီးပွိုင်တွင်လူတော်တော်များများတက်လာသဖြင့်ကားက အတန်ငယ်ကျပ်လာပါသည်။ အား အကိုဆောရီနော် တိုက်လည်းတိုက် တောင်းလည်းတောင်းပန်သဖြင့် အပြင်ငေးနေရာမှဒေါသထွက်ထွက်ဖြင့်ကိုတွတ်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ။
တမဟုတ်ခြင်း ဒေါသတို့ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တော့သည်။ ရပါတယ် ညီမ မတော်လို့ဖြစ်တာဘဲ။ ဟီး ကျေးကျေး အကို ကောင်မလေးက ကိုတွတ်ကိုတောင်းပန်းရင် နောက်သို့လှည့်ပြီး ညီညီ နင်ကလည်းအရမ်းဘဲတိုးတာ ဒီကအကိုကို တိုက်မိတာအားနာစရာ အေပါဟာ ချစ်ကလည်း နောက်ကတအားတိုးလို့ပါ။ ကောင်မလေးက ကိုတွတ်ကိုတောင်းပန်ပြီးနောက် သူချစ်သူကောင်းလေးဘက်သို့ ကိုတွက်ကိုကျော ပေးကာပြန်လှည့်သွားလေ၏။ ခပ်ထွေထွေအိပ်ငိုက်ချင်နေသော ကိုတွတ် ကောင်းမလေကို တိတ်တခိုးကြည့်ပြီးနောက်မျက်လုံး တော်တော်ကျယ်သွားလေသည်။ခြောက်ပေးနီးပါရှိသောကိုတွတ်မေးဖျားလောက် အရပ်ရှိသဖြင့် မိန်ခလေးထဲတွင် တော့ မြင့်ပေလိမ့်မည်။ အသားကဆွတ်ဆွတ်ဖြူသလို ကိုယ်လုံးကလည်းစွဲမက်ဖွယ်အတိပင် ။ အကောင်းစား စပို့ရှပ် အောက်က စွင့်ထွာနေသောရင်နှစ်မွှာက ကျောပိုအိပ်လေးလွယ်ထားသဖြင့်ကော့တက်နေသည်။
စပို့ရှပ်အဖြူ စကတ် ထမီအနက်ဖြင့် ထင်းနေအောင်လှသောကောင်မလေးကြောင့် စားဖားကြီးကိုတွတ်ခင်ဗျာအောက်ကဖွားဖက်တော်ကဒိုင်းကနည်းမာတ်လာလေသည်။ ချစ်ဆိုသောကောင်းမလေးက ကျောပိုးအိပ်ဖြုတ်၍ ကားခပေးသဖြင့်ကိုတွတ်အောက်ပိုင်း ကိုမသိမသာလှမးရှိုးလိုက်ရာ အားပါးပါး ဖင်ကလေးက လုံးတင်းပြီး ကာစွင့်နေတာကို သတိထားမိသည်။ အင် ၃၄ ၂၄ ၃၆ ထက်တော့ မလျော့လောက်ဘူး။ချစ်စုနဒီ အငြိမ်းစားသစ်တောဝန်ထောက်ဦးဘသာ နှင် ဒေါက်တာဒေါ်နဒီ တို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးဖြစ်သည်။ ဦးဘသာက အိမ်ထောင်ပြု နောက်ကျသည်။ အသက် ၄၀ ကျော်ကာမှ မိဘပေးစားသဖြင့် သူ့ထက် ၁၈ နှစ်ကျော်ငယ်သော ဒေါက်တာ နဒီ ဖြင့် အိမ်ထောင်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ အသက် ၆၀ ကျော်သဖြင့် အငြိမ်းစာယူကာ ရာထူးရှိစဉ်က ဆောက်ထားသော မဒဂုံ သစ်တောရပ်ကွက်ရှိအိမ်တွင်ဦးဘသာတို့ မိသားစုနေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ဒေါက်တာနဒီက မြို့ထဲရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံးတစ်ခုတွင် အချိန်ပိုင်းဆေးခန်းထိုင်သည်။အသက်လေးဆယ်အရွယ် ခလေးတစ်ယောက်အမေပင်ဖြစ်စေကာမူ မပူမပင်မကြောင့်မကြနေခဲ့ရသဖြင့် ၁၇နှစ်အရွယ်သမီးချစ်စုနှင့် ညီမအလားထင်ရအောင်နုပြိုဆဲဖြစ်နေသည်။ ချစ်စုတစ်ယောက် အမေတူသမီးဖြစ်သဖြင့် လှပသောကိုယ်လုံးကိုပေါက်ကို ပိုင်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ပညာတတ်မိဘနှစ်ပါး၏ စည်းစနစ်အောက် တွင် နေခဲ့ရသောချစ်စုတစ်ယောက် ယခု ပထမနှစ်ဆေးကျောင်းသူဖြစ်ချိန်ထိ အပြင်အတွေ့အကြုံနည်းပါးပြီး လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ပမာဖြစ်နေတော့သည်။ ညီညီမောင် စာဂျပိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။မိဘများက အစိုးရသတင်းစာတိုက်က ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်။အမနှစ်ယောက်ရှိပြီး ချို့တဲ့သောမိသားစုကဖြစ်သော်လည်း ပညာရေးတွင်ထူးချွန်းသူဖြစ်သောကြောင့် တမိသားစုလုံး၏မျော်လင့်ချက်အဖြစ် ဆေးကျောင်းသို့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ထားပေးကြသည်။
ချစ်စု မြတ်နိုး နှင့် မေသူအောင်တို့သည် အတန်းထဲတွင် အတွဲဆုံးဖြစ်သည်။ ရည်းစားများသော မြတ်နိုးက ဆရာ ။ ကျန်နှစ်ယောက်က တပည့်ဖြစ်သည်။အသားဖြူဖြူမျက်နှာသွယ်သွယ်နှင့် မော်ဒယ်ကိုယ်လုံးနှင့် ခေတ်လွန်အောင်ပြင်တတ်သူ မြတ်နနုးကို ချစ်စုတို့နှစ်ယောက် တိတ်တခိုးအားကျနေမိသည်။ စည်းကမ်းကြီးသောမိသားစုတွေဖြစ်သဖြင့် ချစ်စု နှင့် မေသူအောင် တို့က ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ်သာဝတ်ရရှာသည်။ ပြင်ဆင်တတ်သောမြတ်နိုးထက် မြန်မာဆန်ဆန်ရိုးရိုးဝတ်သော်လည်း အချိုးကျသော ကိုယ်လုံး တင်ပါးဖုံးသောဆံပင် နှင့် ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးကို ကျောင်းသားမျာက ပိုသဘောကျသည်ကို ချစ်စုမသိရှာပါ။ မနာလိုတာဘဲလား ကောင်းစေချင်လို့ဘဲလား မြတ်နိုး၏အောင်သွယ်ကောင်းမူ့ကြောင့် ချစ်စုတစ်ယောက် မြတ်နိုး၏ အထက်တန်း ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင် ညီညီနှင့် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ မြတ်နိုးကမြောက်ပေးသဖြင့် အူကြောင်ကြောင်ချစ်သူနှစ်ယောက် နေ့တပိုင်းအတန်းဖျက်ရွေ့ ရုပ်ရှင်ရုံးသို့ ချီတက်ခဲ့ကြသည်။
ညီညီတစ်ယောက် စိတ်လေနေသည်။လာသာလာရသည် ပိုက်ဆံကသိပ်မပါ။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပိုက်ဆံကသိပ်မကျန်တော့။ ဒါတောင်စားသောက်စရာက ချစ်စုကဦးအောင်ဝယ်လိုက်၍အားနားနေမိသည်။ ရုံးထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်သား ဘယ်ကစရမည်မသိ ။နေကြာစေ့လေးစားလိုက် ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ဖြင့် ရုပ်ရှင်သာ တဝက်ကျိုးလာတယ် ဘယ်ကစလို့စရမည်မသိ။ ချစ်စုတစ်ယောက် မသွားခင်မြတ်နိုးပြေားသောစကားကို ပြန်ကြား၍ ပြုံးလိုက်မိသည်။ ဟဲ့ချစ်စု ဘာလဲမြတ်နိုး ကောင်မ နှတ်ခမ်းနီလေးဘာလေး အပိုယူလာတယ်ဟုတ်။ အေပါဟဲ နင်ကလည်းဘရာကောငါပြေားထားတဲ့အတိုင်းဘဲလားနင်နော် မြတ်နိုးစုနောက်မှငါ့ကျေးဇူးလာမတင်ပါနဲ့ ချစ်စုရယ် ဟိဟိ ချစ် မဝံမရဲအသံဖြင့် ညီညီခေါ်လိုက်သည်။ အင် ပြေားလေ ညီညီ အဲကွန်းကလည်း အရမ်းအေးတယ်ကွာ ဒီဘက်တိုး ပြေားလည်းပြေား လက်တဖက်ကိုပခုံးပေါ်အသာတင်ကာ ချစ်စုကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးပိုက်ထားလိုက်သည်။
အတွေ့အထိမရှိဖူးသော အပျိုပေါက်လေးချစ်စုတစ်ယောက် ရင်တဒိန်ဒိန်ခုန်ကာ အသာမော့ကြည့်လိုက်စဉ် နှတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ပေါ်သို့ ညီညီတစ်ယောက် မနမ်းတတ်နမ်းတတ်ဖြင့် အားပါးတရနမ်းပါတော့သည်။ ပြွတ် အား ညီညီ တော်ပြီးကွာ ညီညီလည်း ချစ်စုကိုနမ်းနေရင်းနဲ့ မရဲတရဲလက်တဖက်ကိုခါးပေါ်မှတဆင့်အပေါ်ဘက်သို့တဖြည်ဖြည်းတိုးလာရာ လုံးဝန်းသော နို့အုံတဖက်ကို ဖျတ်ကနဲ့ အသာအယာအုပ်ကိုင်လိုက်သည်။အိစက်တင်မာနူးညံသော အထိအတွေ့ကြောင့် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင် တော့ဘဲ အား အာ့ အာ့ ပေါင်ကြားတစ်ခုလုံးရွှဲစိုကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေတော့သည်။ ချစ် တစ်ယောက် မတေ့ွဖူးသော အတွေ့ထူးကြောင့် အမည်မဖော်နိုင်သော ဆန္ဒများ တဖိန်းဖိန်း တရှိန်းရှိန်းတက်လာနေစဉ်မှာပင် ညီညီ့အသံကြောင့် ဟဲ့ညီညီ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် တိုးတိုးလေးမေးလိုက်ရာ ဟာ ချစ် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ ထိုအချိန်မှာရုပ်ရှင်ပြီး၍ မီးများကဖြတ်ခနဲလင်းလာတော့သည်။
ကဲသွားရအောင် …. ဟဲ့ နင့်ပုဆိုးမှာဘာတွေလဲညီညီ ။ အော်ခုနရေသောက်ရင်းဖိတ်သွားတာ လာသွားရအောင်။ အပြင်ရောက်တော့ ဘယ်လိုပြန်ကြမလဲချစ် ။ မေးသာမေးလိုက်ရသည် ဖြစ်နိုင်ရင်လိုင်းကာနဲ့သာ ညီညီသွားချင်သည်။ ငွေယား လေးကသိပ်မရှိတော့။ နင်လိုက်ပို့မှာလား အေ ပို့မယ်လေ ဒါဆိုလိုင်းကားနဲ့ဘဲပြန်ရအောင် ငါအိမ်ကို ကျူရှင်ရှိတယ် လို့ပြေားလာတယ်။ ညီညီလည်းဝမ်းသာအားရဖြင့် နင့်သဘော လာဟိုမှာကားလားနေတယ် မြန်မြန်လုပ် ကြွိ ကြွိ ကြွိ ဟာ သေတော့မှာဘဲ ဘယ်လိုလုပ် လမ်းကူးနေတာလဲ သေချင်နေလား ချစ်စု အတွေစပြတ်ပြီး နောက်သို့ယိမ်းယိုင်သွားကာ ကမန်းကတန်းညီညီကို လှမ်းဆွဲလိုက်မိသည်။ ကိုတွတ်တယောက် ကောင်မလေးကို သွာရေယိုနေစဉ်မှာပင် ကားဘရိတ်ဆောင့်နင်းလိုက်သဖြင့်ကျင့်သားရနေသော လက်ကို ဟန်ချက်ထိန်းသယောင်ဖြင့် ကောင်းမလေးဖင်နှင့် နံရံကြားကတန်းကို အသာလှမ်းကိုင်လိုက်သည်။
ကံကောင်စွာပင် ကောင်မလေးက ယိုင်ကြလာပြီးလက်ပေါ်ဖိမိစဉ် အသာအယာထိန်းသလိုနှင့် လက်ဖဝါးနှင့်အသာအုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။ အပြင်တွင် အမှောင်သန်းနေပြီး ကားကလည်း အလယ်မီးတပွင့်သာရှိသဖြင့် နောက်ဆုံးဒေါင့်တွင်ရှိနေသော ကိုတွတ်အတွက် ရာသီဥတုက သာသာယာယာဖြစ်နေသည်။အခြေအနေအသာအကဲခတ်၍ ကောင်မလေး၏ဘယ်ဘက်တင်ပါကိုခပ်ဖွဖွလေး ညစ်လိုက်ရာ တွန့်ခနဲဖြစ်သွားသော်လည်း ကောင်းလေးနှင့်သာစကားဆက်ပြေားနေ၍ နောက်တဆင့်တက်ဖို့ ကိုတွတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ကောင်းလေကလည်း မရိပ်မိနိုင်သဖြင့် ဘေးချင်းယှဉ်ရက်အနေအထားမှ အသာလှည်လိုက်ရာ ထောင်မတ်နေသော ဖွားဖက်တော်နှင့် ကောင်မလေး တင်ပါဘေးဘက်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့သည်။ ချစ်စုတစ်ယောက် အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားသည်။ပထမတော့ အမှု့မဲ့အမှတ်မဲ့ရှိနေစဉ် မိမိဖင်သားကို ဘေးမှလူ ကြီးက ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေသည်။
ကြောက်တာရော ရှက်တာရောကြောင့် ရင်ခွင်ထဲရှိကျောပိုးအိပ်ကိုသာကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ် ထားစဉ် ဘယ်ဖက်တင်ပါဘေးသို့ ပူပူနွေးနွေး အချောင်းတစ်ခုလာထောက်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။ ဘာမှန်းစဉ်းစားလိုက်မိ၍ ရှက်က လည်းရှက်ဒေါသကလည်းထွက်ဖြင့် ညီညီကိုပြေားဖို့ မော့ကြည့်လိုက်ရာ ဖုန်းဝင်လာ၍ဖုန်းထုတ်ပြေားနေသဖြင့် ဘယ်လက်ကို အသာချ၍ တွန်းထုတ်လိုက်မိသည်။ ကောင်မလေးကလက်တဖက်ချ၍တွန်းဖယ်လိုက်စဉ် အထာနပ်နေသောကိုတွတ်က ဘယ်လက်ဖြင့်ကောင်မလေး လက်ကို အသာကိုင်ပြီး လိင်တံပေါ်တင်ပေးကာ ခပ်တင်းတင်း အပေါ်ကဆုပ်ထားလိုက်သည်။ ချစ်စုတစ်ယောက် ပေါ့စေလိုမှ ဆေးကလေးနေပေပြီး။ ပူနွေသောအထိအတွေ့က လူတကိုယ်လုံး ဖိန်းတိန်း ရှိန်တိန်း ဖြစ်လာသလိုလို သာယာမိသလိုလို နှင့် ကြောက်စိတ် ဒေါသစိတ်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်လာသည်။ကျိတ်ကာရုန်းပေးမယ့်လည်း အင်အား ကမတူ။
မထူးပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကာ ညီညီကိုပြေားရန်ပြင်လိုက်စဉ် ချစ် ကိုယ်တောင်းပန်းပါတယ်ကွာ ကိုယ်အခုအိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ် ဖေဖေ အလုပ်မှာမူးလဲလို့ ဆေးရုံးကြီးကိုတင်လိုက်ရတာ အခုကိုယ်သွားမှဖြစ်မယ် ရတယ် ညီညီ ချစ်ဘာသာပြန်ပါ့မယ် ရှေ့မှတ်တိုင်ဆင်းတော့နော် ချစ်ဆောရီနော် ကိုသွားမယ် ပါတယ်ဆရာရေ့ ပြေားလည်းပြေားတိုးလည်းထွက်သွားသော ညီညီကိုကြည့်နေရင်းမှ ချစ်စုတစ်ယောက် လက်ဖဝါးထဲကဟာကြီးကို အမှု့မဲ့ အမှတ်မဲ့ ညစ်လိုက်မိသည်။ အာ့ ခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် အတောနာသွားသောအသံကြားသဖြင့် လက်ကိုရုပ်ပြီးမော့ကြည့်ကာ ဆောရီနော်အကိုဟုပြေားလိုက်မိသည်။ ပြေားပြီးနောက်ချစ်စုတစ်ယောက် ခုနကအဖြစ်ကိုပြန်သတိရကာယောင်ကန်းကန်းလေးဖြစ်သွားရသည်။ ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ပြေားနေတာကိုနားထောင်ရင် စဉ်စားနေသောကိုတွတ်တယောက် အမှတ်မထင်အညစ်ခံရ၍ နာကျင်သွားသော်လည်း ကောင်မလေး၏ အူကြောင်ကြောင်အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချလိုက်သည်။
ပေးညီမအိတ် ပြေားလည်းပြေား ယူလည်းယူကာ လာဒီဖက်ကိုဟု ပခုံးမှကိုင်ကာကောင်းမလေးကို နံရံဒေါင့်ပို့လိုက်လေသည်။ရုတ်တရက်ခဏတာအတွင်းမှာ ချစ်စုတစ်ယောက်ပခုံးလည်းအဖက်ခံရ နံရံဒေါင့်သို့လည်းရောက်ရလေသည်။ မှတ်တိုင်တွင်ထပ်တက်လာသောလူမျာကလည်းအတင်းတိုးလာသဖြင့် ကားကလည်းအရမ်းကြပ်လာရာနံရံဒေါင့်တွင် ပူးကပ်နေပေတော့သည်။ ကောင်မလေးကြောင်နေစဉ်မှာပင် အခွင့်အရေးကိုအမိအရအသုံးချကာ ကောင်မလေးကို ကားတြင်ဘက်သို့လှည့် စေကာ ခါးလေးကိုဖက်၍ ပူးကပ်ထားလိုက်သည်။ အေလင်းရောင်ကကောင်းစွာမရ နောက်တက်လာသောသူများကလည်း သတိထားမိစေကာမူ သမီးရည်စားပုံစံမျိုးဖြစ်နေသဖြင့် မည်သူမျှဂရုတစိုက်ကြည့်မနေပေ။ အစိမ်သက်သက် အပျိုမလေးချစ်စုခင်ဗျာ မည်သို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘဲ ကိုတွတ်ရင်ခွင်ထဲရောက်ရရှာသည်။တစ်ခါမှမကြုံဖူးသော ယောင်္ကျာတစ်ယောက်၏ ရင်ခွင်ထဲရောက်နေရုံသာမက။
ဖင်သားမြောင်းအပေါ်က ပူနွေးနွေးအထိအတွေ့ကလည်း မိမိရရ ရှိနေသဖြင့် ကြောက်စိတ်တဖြည်းဖြည်းလျော့ကာ သာယာမူ့ဘက်ရောက်လာမိသည်။ခေါင်းလေးအသာငဲ့ကာ ပါတ်ဝန်ကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်ရာ ထိုင်နေသူများကလည်းကျောပေးထား ရပ်နေသူများကလည်း သူ့အာရုံနှင့်သူဖြစ်နေသဖြင့် ချစ်စုတစ် ယောက်စိတ်လျော့လိုက်တော့သည်။ အခြေအနေက အိုကေနေပြီးမို့ ကိုတွတ်တယောက်နောက်တဆင့်တက်ရန်ပြင်တော့သည်။ကျောပိုးအိတ်ကိုပိုး လွယ်လိုက်ပြီး လွတ်သွားသောညာလက်ကိုအသာနှစ်ယောက်ကြားအသာချကာ ကောင်မလေးဖင်လုံးလုံးလေကို အသာနယ်ပေးနေလိုက်သည်။ အားရအောင်နယ်ပြီးနောက် ညီမဒါလေပြန်ပိုက်ထားလိုက်ပါလား။ ချစ်စုလည်းဖီလင်တက်လာသဖြင့်ပြေားသည့်အတိုင်း ကျောပိုးအိပ်ကိုအသာပိုက်ထားလိုက်သည်။ ကိုတွတ်လည်း အသာပြန်ထောက်ကာ လက်နှစ်ဖက်လုံးအလုပ်ရှုပ်ပါလေတော့သည်။
ညာလက်ကိုကျောပိုးအိပ် ကြားအသာထည့်ကာ လုံးဝန်သောနို့လေးကို အသာအုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ကောင်မလေး ဆတ်ခနဲ ဖြစ်သွားသော်လည်းငြိမ်နေသ ဖြင့် အသာအယာလေး ပွတ်ပေးနေသည်။ပါနားကို အသာကပ်ကာ ညီမ ဘယ်အထိပြန်ရမှာလဲ ချစ်စုလည်းမရဲတရဲဖြင့် မဒဂုံပါအကို အော်ဒါဆိုအတူတူဘဲ အင် အရိုင်းလေးချစ်စုတစ်ယောက် တစ်ခါမှမခံစားဖူးသော အတွေ့အထိကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ခံစားနေစဉ်မှာပင် ခါးပေါ်မှလက်က အောက်သို့တဖြေးဖြေးဆင်းလားပြီး ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးကိုထမီပေါ်မှ တဖြည်းဖြည်းပွတ်ပေးနေသည်။ အသားဖြူသူဖြစ်သဖြင့် ချစ်စုတယောက်ဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ဘဲ ပေါင်ကြားထဲမှ အရည်တသွင်သွင်စီးလာတော့သည်။ ကိုတွတ်လည်းဘေဘီကိုအသာကြည့်ကာ ကောင်မလေးကိုဆွဲလှည်ပြီး ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာကျောလေးသပ်ပြီးပါးချင်းကပ်ထားလိုက်သည်။ဘယ်လက်ကို နှစ်ယောက်ကြားထဲထည့်ကာ စကတ်ထမီးကြားထဲမှ လက်လျိုကာ စောက်ဖှတ်လေးကို အသာ စမ်းလိုက်သည်။
အောက်ခံဘောင်းဘီကြားမှလက်ထည့်ကာ အစေ့လေးဟုထင်ရသောနေရာလေးကို အသာလေးပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။နှတ်ခမ်းသားလေးများကိုပွတ်ပေးပြီးနောက် လက်ခလယ်ကို အသာအယာထည့်လိုက်ရာ ချစ်စုတကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်လာလေသည်။ ရွှဲစိုနေသောအရည်များကြောင့် ကြပ်ပင်ကြပ်သော်လည်း အဝင်အထွက် စီးစီးလေးဖြစ်နေပေသည်။ ချစ်စုတစ်ယောက် ကိုတွတ်၏ ကျွမ်းကျင်သောအကိုင်အတွယ်အောက်တွင် ကာမဒီရေတလိမ့်လိမ့်တက်လာကာ ကိုတွက်ပခုံးကိုကိုင်ကာ မျက်နှာကိုသာမော့ကြည့်နေမိသည်။ ကောင်းမလေးလက်တဖက်ကိုအသာယူ၍ ထောင်မတ်နေသောလိင်တံပေါ်တင်ပေးလိုက်ကာ အဝင်အထွက်ကို ခပ်သွက်သွက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ချစ်စုမှာလည်း ကိုတွတ်လီးကိုခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကာ ကိုတွတ်လက်လွတ်လိုက်သည့်တိုင် သူ သင်ပေးသလိုဂွင်ထုပေးနေလေသည်။ အာ့ အာ့ အကိုဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး ပြီးခါနီးမှန်းရိပ်မိသော ကိုတွတ်။
ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးလိုက်ရာ ကောင်မလေးမှာ မေကြောလေးများထောင်လာကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေတော့သည်။ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ ကျောလေးသပ်ပေးနေသော်လည်း ကောင်မလေးကဆက်ထုပေးနေသဖြင့် ကိုတွတ်လည်း အရည်များထွက်ကုန်တော့သည်။နှစ်ယောက်သား သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြင်ပြီးပါတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်ရာ ဘေလီတံတာပေါ် ရောက်နေပြီးဖြစ်သည်။ ညီမဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလားဟင် ချစ်စုက မော့ကြည့်ရင်း ပေးလို့မရဘူး အိမ်ကသတ်လိမ်မယ် အကို ဒါဆိုအကို့နံပါတ်ယူထားလိုက်နော်အကူအညီလိုတာတို့တိုင်ပင်စရာတို့ရှိရင်အချိန်မရွေးဆက်လိုက်ပါ ဟုတ် အကို” ဟယ်လို ကိုကိုလား နဒီအရေးကြီးလူနာရှိလို့ ဒီည နိုက်ဆက်ဆင်းနေတယ် သမီးရော အိပ်ပြီးလား အော် ဟုတ်ကဲ့ ဒါဘဲနော် ဘိုင့် ဒေါ်နဒီတစ်ယောက်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးနောက် ဘာအတွင်းသို့ပြန်ဝင်လာလေသည်။
နယ်မှရောက်လာသော ကျောင်းနေ ဘက် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မေမိုးတို့လင်မယားက ညစာစားရန်အတင်ခေါ်သဖြင့် ပါလာရခြင်းဖြစ်သည်။သောက်ကြစား ကြဖြင့် အတန်ငယ်ကောင်းနေသောကြောင့် အိမ်မပြန်တော့ဟုဆုံးဖြတ်ကာ ခင်ပွန်ဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။တိုးညင်သောသီချင်သံ မှိန်ပျပျမီးရောင်အောက်က ကနေကြသောလူများကိုကြည့်၍ နဒီတစ်ယောက်ငယ်သွေး လေးများ တက်ကြွလာမိလေသည်။ဟဲ့ နဒီအဆင်ပြေလား ပြေပါတယ် မေမိုး ရော့ နဒီ တစ်ခွက်လောက်ထပ်ယူဦး ကျေးဇူးပါကိုသက်ထွန်း မေမိုးအမျိုးသားကိုသက်ထွန်းကမ်းပေးသော ဝိုင်ခွက်ကိုအသာယူရင်ခပ်ဖြည်းဖြည်းမော့နေမိသည်။ကမ်းနားလမ်းရှိဘားတစ်ခုတွင် နဒီ မေမိုးတို့စုံတွဲနှင့်ကိုသက်ထွန်းအလုပ်လုပ်သော အန်ဂျီအို မှ မစ္စတာ ရောဘတ်ဧည့်ခံသော ညစာကိုစားသောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ကနေသူများကိုကြည့်ရင် ရောဘတ်က မစ္စ နဒီ ပလိစ် ရောဘတ်ကကရန်ခေါ်နေရာနဒီကကိုသက်ထွန်းနဒီထမိန်ကြီးနဲ့ကလို့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်။
မေမိုး နင်ကတတ်တယ်ဟုတ် ကပေးပါလားဟာ နဒီ နင်ကတော့လုပ်ပြီးဟာ မေမိုးက ကိုသက်ထွန်းကို ဘယ်လိုလဲပုံစံဖြင့်ကြည့်လိုက်ရာ ခေါင်းညိတ်ပြသဖြင့် အသာထကာ ရောဘတ်ကိုလက်ကမ်း လိုက်လေသည်။သူငယ်ချင်နဒီကိုအားနားသဖြင့် ကိုယ်စားထွက်လိုက်သောမေမိုးမှာ ရင်တဖိုဖိုဖြင့် ကပွဲကြမ်းပြင်ထက်သို့ ရောက်လာလေသည်။ နဒီ ခွက်ပေးဦး ကိုသက် အများကြီးမထည့်နဲ့တော့နော် နဒီများနေပြီး ကိုသက်ထွန်းလည်းမိမိမိန်းမနှင့် ဆန်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသော နဒီကိုကြည့်၍ စိတ်ထဲကဘယ်လိုဇယားချရမလဲစဉ်းစားနေမိသည်။ မေမိုးက မျက်နှာလေးကချစ်စရာကောင်းသော်လည်း ကိုယ်လုံးလေက မော်ဒယ်ကိုယ်လုံးလေးဖြစ်သည်။နဒီကတော့ ပေါင်တန် ရှည်မင်းကြိုက်စိုးကြိုက် ရေဆေးငါးကြီးဖြစ်သည်။ ကိုသက်ထွန်းကလူကောင်ကခပ်ထွားထွား အသာညိုညိုရင်အုပ်ကားကား လိုးအားကောင်းသူဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ခါ ဖြူဖြူသွယ်သွယ်ဇနီးဖြစ်သူကိုလုပ်ရတာရိုးလားသဖြင့် တောင့်တောင့်ရောင့်ရောင့် မျိုးလေးကိုအုပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဟု စိတ်ကူးနေမိသည်။ ကိုသက် နဒီအရမ်းအန်ချင်လာတယ် ဟာ ဒါဆို တွိုင်လက် သွားရအောင် အမေ့ ဆက်ခနဲ့ထလိုက်ရာ နဒီမှာ သောက်ထားသောအရှိန်ကြောင့် မိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ရရဲ့လား ပြေားလည်းပြေား တွဲလည်းတွဲလိုက်ရာ အကြံသမားကိုသက်ထွန်းက နဒီခါးလေးကိုအသာပွေ့လိုက်သည်။ ညီလေ ရေချိုးခန်းဘယ်နားလဲ ဟိုတစ်ခါးကိုဖွင့်ဝင်သွားအကို ရလားနဒီ ကိုယ့်ပခုံးကိုဖက်ထား ။ နဒီတစ်ယောက် မတတ်သာ၍ ပခုံးဖက်ထားရသော်လည်း အတွေ့အထိကြောင့် နှစ်အတန် ကြာကင်ကွာနေသော ကာမဆန္ဒများ တဖိန့်ဖိန့်နိုးကြားလာလေသည်။ ခါးကိုတွဲသလိုနှင့် ကိုသက်ထွန်းလက်ကလည်း မောက်ကားနေသော တင်သားအပေါ်ကိုမထိတထိ ရောက်လို့ကာနေ၏။ အေ့ အေ့ ဖြည်းဖြည်းအန် အန်ချင်စိတ်တောင် ကိုသက်ထွန်းကြောင့်တဝက်လောက်ပျောက်သွားရသည်။
ကျောကိုထုရင်းထိန်းပေနေသော ကိုသက်ထွန်းလက်တဖက်က နဒီရင်သားတဖက်ကို အသာညစ်လိုက်လေသည်။ အင့်ကနဲ့နောက်တွန်လိုက်ရာ ဖင်သားနှစ်ခုကြားသို့ မာတောင်နေသောဖွားဖက်တော်ကို ကိုသက်ထွန်းအသာတေ့ပေးလိုက်သည်။ ကိုသက်ထွန်းက နဒီကိုယ်လုံးကို အသာအယာပင်ရင်ခွင်ထဲဆွဲထည့်လိုက်သည်။ရင်သားများကို ဆွဲနယ်ခြင်းခံနေရသလို တင်ပါကိုလည်းအထောက်ခံနေရသောနဒီမှာ ပေါင်ကြားအတွင်းမှ အရည်များတသွင်သွင်ကျဆင်လာတော့သည်။ကိုသက်ထွန်း လည်း ဘေဘီကြည့်လိုက်ရာ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အခန်းတစ်ခုကိုမြင်သဖြင့် ဒရောသောပါဖြင့်နဒီကိုဆွဲခေါ်လာတော့သည်။ ကိုဘသာနှင့် လိင်မူ့ကိစ္စမဆက်ဆံဖြစ်တာနှစ်အတန်ကြာနေသော ဒေါ်နဒီတယောက် အတွေ့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ဘဲ ကိုသက်ထွန်းခေါ်ရာနောက်သို့ မညင်းဆန်ဘဲ လိုက်ပါလာခဲ့လေသည်။ အခန်းက စတိုးပစ္စည်းထားရာအခန်း ဖြစ်သဖြင့်မီးတပွင့်ခပ်မှိန်မှိန်သာထွန်းထားသည်။
တံခါးကိုအသာအယာပိတ်လိုက် ပြီးနောက် ကိုသက်ထွန်းက ခပ်တွေတွေလေးဖြစ်နေသော နဒီ့နှတ်ခမ်းများကို အာရပါရနမ်းလေတော့၏။ ပြွတ် ပြွတ် အကိုမတော်ဘူးထင်တယ်နော် ကိုသက်ထွန်းက ဘာမှထပ်မပြေားတော့ဘဲ ထမ်မံနမ်းလိုက်ပြန်သည် ၃၆ လက်မထက်မနည်းသော ရင်စိုင်များကို အားရပါရ အငမ်းမရ ဖြစ်ညစ်နေပြန်သည်။ လက်တဖက်ကတဖြည်းဖြည်းတင်စိုင်ပေါ်ရောက်ကာ အားရပါရ ထပ်မံနယ်လိုက်သောအခါတွင်မတော့ နဒီတစ်ယောက်ကိုသက် ထွန်းရင်ခွင်ကိုမှီကာ တအင်းအင်းသာညဉ်းညူနေတော့လေသည် ကိုသက်ထွန်းလည်းအချိန်မဆိုင်းတော့ဘဲ အနားရှိစားပွဲပေါ်သို့နဒီကို အသာတင်ကာ ထမီကိုဆွဲလှန်၍ အောက်ခံပင် တီအနီရောင်းလေးကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲဖြဲလိုက်လေသည်။ နဒီမှာလည်း ခင်ပွန်သည်နှင့် မတူသောခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံမူ့ကြောင့် ဆန္ဒများ တရိပ်ရိပ်တက်လာကာ ပေါင်လေးကိုအသာကားပေးလိုက်မိသည်။
ကိုသက်ထွန်းလည်း ဖွေဆွတ်နေသော ပေါင်တံ နှစ်ခုကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ကာ တံတွေးတစ်ချက်မြိုပြီး ဘောင်းဘီကိုကမန်ကတမ်းချွတ်လေတော့သည်။ နှတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုအသာဖြဲ၍ အရှည် ၈ လက်မ လုံးပါတ် ၅လက်မခန့်ရှိသော ဒုတ်ကို တချက်တည်းဆောင့်ထည့်လိုက် တော့သည်။ ပြွတ် ဇွတ် အမလေးအကိုရဲ့ တောင့်တင်းဆူဖြိုးသော အိမ်ထောင်သည်ပင်ဖြင့်လင့်ကစား တချက်တည်းဆောင့်သွင်းလိုက်သဖြင့် နဒီခဗျာ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း အရသာနှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်ခံစားကာ တစ်ချီပြီးသွားလေတော့သည်။ ဇွတ် ဇွတ် အင့် အား အား အမလေ အင့် အင့် ခုံစောင်းတွင် ကော့ပေးထားကာ အားရပါးရ ဆောင့်ခံထိနေသဖြင့် နဒီ တစ်ယောက် တစ်ခါမှမရဘူးသော ကာမအရသာကိုရ၍ ထပ်ကာထပ်ကာ ပြီးဆုံးခြင်းရောက်နေလေတော့သည်။
အချိန်ကသိပ်မရသဖြင့် ကိုသက်ထွန်းတယောက် ပွဲခပ်မြန်မြန်ဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ ခလေးအမေဖြစ်သော်လည်း တလက်ကိုင်ဖြစ်သဖြင့် နဒီအဖှတ်မှာ လိုးရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလှလေသည်။ အံကိုကြိတ်ကာ အားရပါးရ အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးနောက် အသာဆွဲထုတ်ကာ နဒီကိုယ်ပေါ်တက်ခွ၍ နဒီ စုတ်… စုတ်… အ… အ… အ… အီး… အီး… အီး…. နဒီခေါင်းကို ကိုင်ကာအားရပါးရ ပါစပ်အတွင်းသို့ သုတ်များကို လွတ်ထုတ်လိုက်တော့သည်။ ကောင်းလား နဒီ ပြီကေားပြီးရဲ့လား သွားလူဆိုး ဒီမှာလေးခါတောင်ပြီးသွားပြီး။ သွားရအောင် လူများတွေရိပ်မိကုန်ဦးမယ်။ ကိုသက်ထွန်းလည်းယခုမှမိန်မကိုသတိရကာ ကမန်းကတမ်း အဝတ်အစားများကိုကောက်ဝတ်လေတော့သည် …… ပြီးပါပြီ။
ဆ န့် တ ငင် ငင်
အ မူ့ တော်